Kedu ihe bụ nzube SWOT, ihe mgbaru ọsọ ya, adịghị ike na uru
SWOT-analysis bụ ụzọ dị irè ma dị irè nke atụmatụ atụmatụ
A na-akpọ SWOT-usoro usoro atụmatụ nke atụmatụ, nke na-akọwa ihe ndị dị na mpụga na nke ikuku nke ndị nabatara, nwere ike inyere aka ịmepụta nghọta zuru ezu nke ọnọdụ ọrụ. Ihe a na-amụ na-enye ohere iji mee mkpebi ndị ziri ezi. Ndị ọkachamara na ndị na-ere ahịa na-enwe mmasị dị otú ahụ.
SWOT-analysis - gini ka ọ bụ?
Iji mee nyocha dị otú ahụ, nnukwu databasị ma ọ bụ ọzụzụ pụrụ iche adịghị mkpa, ọ bụrụ na onye ọkachamara nwere ihe ọmụma gbasara ihe ahụ, ọ na-edekọta tebụl dị mkpa. SWOT-analysis bụ ụzọ isi nyochaa ọnọdụ ahụ, nke dabeere na nchọpụta site n'ọkwá anọ:
Ike bụ ike;
Adighi ike - adịghị ike;
Ohere - ohere;
Egwu bu egwu.
Ike na adịghị ike - data na oge ọmụmụ. Ma ohere na iyi egwu enweela ọnọdụ ndị ọzọ, nke nwere ike ọ gaghị eme, ha nile dabere na mkpebi ahụ. Onye ọkà mmụta sayensị bụ Kenneth Andrews kwuru na mbụ dị otú ahụ na nnọkọ azụmahịa na Harvard, na-ebute ụzọ nyochaa mgbanwe nke ọrụ ụlọ ọrụ ahụ. O mere n'agbata narị afọ gara aga, a na-etinye usoro ahụ n'ọrụ na nsoro dị warara, ma n'oge a, njikwa ọ bụla njikwa nwere ike iji usoro SWOT.
Kedu ihe nyocha SWOT?
Na omume, a na-eji ụkpụrụ dị otú ahụ nke SWOT-analysis:
Nyocha zuru ezu.
Di omimi. A na-amụba usoro ihe omumu niile na mmepe.
Na-eburu n'uche atụmatụ nke ihe ahụ.
Ebumnuche nke analysis SWOT bụ nkọwa nke dị iche iche, nke a na-ewere dịka ọnọdụ dị n'ime. Uru nke usoro a:
Na-enyere aka gbakọọ ike na ike;
Nyochaa isi ihe na-adịghị ike, na-achọ ụzọ isi meziwanye ha.
Chọpụta ihe ọ pụtara na ọ bara uru iji ya mee ihe.
Na-achọpụta egwu kachasị egwu ma na-ewuli ezi nchebe.
Na-ekpebi ihe kpatara ọrụ dị irè na ahịa.
Ọghọm nke nyocha SWOT
Usoro nke SWOT-analysis enweghị ndụmọdụ ma ọ bụ azịza nye ajụjụ a, ndị nyocha enwetalarịrị na nke a. Ihe na-abaghị uru nke usoro a bụ ihe na-erughị ụyọkọ, ma a ghaghị iburu ha n'uche:
Nsonaazụ dabere na ogo na olu nke ozi nke a na-agaghị enwe ike ịmezu mgbe niile.
Mgbe ị na-eme tebụl, a gaghị ewepụ kọmputa kọmputa: ọnyà nke ihe bara uru, atụmatụ ezighi ezi nke ndị ọnụ ọgụgụ.
Kedu esi eme nyocha SWOT?
Kedu esi eme nyocha SWOT? Atụmatụ nke omume bụ:
Chọpụta ebe a ga-eduzi nchọpụta ahụ.
Kọwaa nke ọma na ihe niile ahụ, ikere òkè na ohere.
Atụkwasịla nanị na echiche gị, nkwubi okwu kwesịrị ịbụ ebumnobi.
Iji dọta ọtụtụ ndị mmadụ ka ha rụọ ọrụ ka ha wee bụrụ ihe atụ bara ụba. Ọ na-ewukwa SWOT-analysis nke ụlọ ọrụ ahụ.
Jiri okwu nkenke na-anọchi anya nkowa, kama omume.
Ntugharị SWOT - ihe atụ
Dabere na nyocha nke SWOT, a kwadebere nkwubi okwu ahụ, dị ka n'ọdịnihu nzukọ kwesịrị ịzụlite azụmahịa. A na-akwado aro maka nchịkọta ego site na mpaghara. Ihe ndị a na-aghọ ihe ndabere maka ịmepụta usoro ahia na mgbasa ozi, atụmatụ, nke ga-eme n'ọdịnihu ma kwubie. Ntugharị gbasara SWOT gụnyere ọmụmụ ihe niile, ma nyochaa ha n'otu mpaghara ahụ:
atụmatụ nke enye;
ahụmahụ ndị ọrụ;
ndị ọrụ na njikwa nke azụmahịa;
ezigbo ụlọ ahịa;
atụmatụ nke mgbasa ozi mgbasa ozi;
Otu esi eme SWOT-analysis - gbalịa imebi usoro ahụ na nzọụkwụ:
Ịmụ banyere gburugburu ebe obibi . Ajụjụ bụ isi: ihe ndị dị aṅaa na-emetụta azụmahịa?
Nnyocha nke gburugburu ebe obibi . A ghaghị iji ọtụtụ ajụjụ mee ihe iji chọpụta egwu na ihe ize ndụ.
Akwụkwọ edemede SWOT . Ejikọtara ozi anakọtara n'akụkụ anọ.
Usoro SWOT . A na-atụle ihe ndị dị na ntụgharị nke ihe dị iche iche, a na-ewukwasị ha ụzọ isi.
Azụlite usoro nke SWOT-analysis na-etolite na-eburu n'uche ihe niile amapụtara nke ga-ejikọta ya na usoro a mepụtara. Ịnye nsonaazụ ndị ahụ bara uru maka mmepe nke ụlọ ọrụ ahụ, nakwa maka ịzụ ahịa ahịa, na maka nkwalite. Ụkpụrụ ahụ dị ezigbo mkpa, taa ọtụtụ ndị isi nke nnukwu ụlọọrụ mejuputara mmemme dị otú ahụ. Nyocha SWOT kwesịrị inye azịza zuru ezu maka ajụjụ ndị dị otú a:
Ụlọ ọrụ ahụ ọ nwere ọnọdụ siri ike?
Omume nwere ike ime nke ọma?
Ihe na-adịghị mma na-egosi na ọ dị mkpa ịdọ aka ná ntị
Ikike ndị bara uru?
Mgbanwe ndị dị n'èzí nke na-enyere aka nweta ihe mgbaru ọsọ ?
Nchịkọta - ụdị, uru na ọghọm
Àgwà nke njikwa
Mbadamba ụrọ maka resorption site na mgbu na akpịrị
Marshmallow - uzommeputa
Lasix - egosi maka ojiji
Avocado mmanụ maka ihu
Clarinka dị mma - na-eto eto na mkpụrụ, iwu nke ịkụ ihe ma lekọta
Anorexia tupu na mgbe: ndị na - achịkwa ọrịa ahụ!
Karịa ịdọta Maculae site na dandelions na uwe?
Eggshell - uru
Mkpụrụ mmanu Cod - uru na nsogbu nye ahu nwanyi
Uwe ejiji maka 2014
Kpakpando 20, bụ ndị n'oge gara aga - ndị ọrịa nke ụlọ ọgwụ psychiatric
Ruo ole mgbe ka m nwere ike ịkwanye nwa agbọghọ?
Kedu ihe mmụọ nwere?